मार्केटिङ, मार्केटिङ सुझाव
इन्टरनेट को संभावनाहरु धेरै तेजी विकसित गर्दै छन्। खरिद र बिक्री कारोबार को एक वृद्धि नम्बर अनलाइन ढाँचामा काम, सन्देश बोर्डहरू मार्फत। वस्तु इन्टरनेटबाट तपाईं यहाँ प्रतियोगिता सामना गर्न छ त, धेरै बेच्न चाहने। आफ्नो विज्ञापन चलिरहेको छ कसरी बनाउने र रूपमा चाँडै सकेसम्म कुरा बेच्न अरूलाई बीचमा यो आवंटित गर्न?
किनभने यो सम्भावित खरिदकर्ता आकलन गर्नेछ विज्ञापन कम्पाइल गरेर, धेरै ध्यान दिएर लग्नु गर्नुपर्छ। एक विज्ञापन एकै समयमा विभिन्न स्रोतहरूमा हुन सक्छ, तर तिनीहरूले5नियमहरू आधारित हुनुपर्छ। यी नियमहरू उहाँलाई लाभ र खरिदको लाभ बताउँदै ग्राहकको भाषा विज्ञापन गर्न मद्दत गर्नेछ। निम्नानुसार उनि:
1 clings र शीर्षक
प्रभावकारी विज्ञापन को सफलता अफलाइन 50% र प्रमुख शीर्षक थप निर्भर छ। प्रस्ताव सयौं मार्फत हेर्दै, खरीदार नाम विशेष ध्यान दिन्छिन्, र पछि विवरण हेर्न निर्णय गर्छ। तपाईं निर्माण को एक प्रकार "सिद्ध अवस्थामा उत्पादन नाम +", साथै विनोदी नाम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ, मुख्य जोड उत्पादनहरु प्रयोग गर्दा एक व्यक्ति प्राप्त गर्न सक्ने प्राविधिक डाटा को कुनै विवरण र भावनात्मक घटक दिनुपर्छ। विवरण पनि embellished छैन त त्यो प्राप्त हेरचाह गर्नुपर्छ। सही कमजोरीको दर्शाउन आवश्यकता वर्णन पछि, अन्यथा आगंतुकों शङ्काको संग प्रस्ताव गर्न प्रतिक्रिया थियो।
निःशुल्क विज्ञापन राम्रो काम यो आकार, रंग, माल संकेत को उमेर र गुणस्तर बारे जानकारी को धेरै यसो भने, यो रूपमा चाँडै सकेसम्म बेच्न अधिक अवसर। र यो तपाईं लामो व्याख्या गर्न आवश्यक मतलब छैन। मुख्य कुरा डी सबै बोर्ड पाठ सम्पादक प्रस्ताव ढाँचामा पाठ प्रमुख अंक जोड दिंदै, अनुच्छेद, शीर्षकहरू, बुलेट, markerovannye सूची विभाजन गरिएको छ, र यति मा छ।। कहिले काँही, सम्भावनाहरू पाठ सम्मिलित द्वारा मात्र सीमित छन्।
कारण बिक्री 3. अलगाव
बिक्री को लागि कारण सधैं छ, त्यसैले प्रयोगकर्ता कम गुणस्तर सामान जोगिन प्रयास गरिरहेको छ। उत्पादन वास्तवमा क्षतिग्रस्त छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई बारेमा विवरण दिन आवश्यक छ।
खरिदको4तस्वीरहरु
यो मान्छे आँखा खरीद कुनै गोप्य छ, त्यसैले तस्बिरहरू गुणस्तर तपाईं अग्रिम हेरचाह गर्न आवश्यक छ। कुरा आदेश अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ भने, र विक्रेता आफ्नो तस्वीर छैन, मार्फत इन्टरनेट पनि सिफारिस गरिएको छैन समान फोटो डाउनलोड गर्नुहोस्। तिनीहरूले मुर्ख र सबै भन्दा साधारण हो भने पनि वास्तविक फोटो हुनेछ भने, राम्रो। हामी गुणवत्ता ध्यान गर्नुपर्छ: चित्र, प्रकाश सही हुनुपर्छ, अन्यथा ग्राहक राम्रो उत्पादन बुझ्न सक्ने छैनन्।
5 दर्शक को उमेर
उत्पादन वा सेवा मुख्यतः साना दर्शकहरु मा गणना हो भने, तपाईंले हास्यास्पद हुन कि एउटा विवरण थप्न सक्नुहुन्छ। संभावित ग्राहकहरु को भूमिका वयस्क दर्शक गर्दछ जब, यो हास्य त्याग्न र विस्तृत विनिर्देशों विवरण विशेष ध्यान गर्न उचित छ।
मार्केटिङ रिसर्च। व्यापार मार्केटिङ।
मार्केटिङ प्रक्रिया: खरिद गर्न निर्णय। प्रक्रिया कदम
उत्पादन विज्ञापन को उदाहरण। विज्ञापन को प्रकारका
मूल व्यवसाय स्मृति चिन्ह: वृद्धि ग्राहक लोयल्टी!
को मार्केटिङ संचार प्रणालीमा विज्ञापन
Altai रिजर्व - को Altai क्षेत्र को एक हाइलाइट
मस्तिष्क लागि खराब - पूर्ण-समय काम?
होलोन, इस्राएलका शहर: फोटो, पर्यटकहरु समीक्षा
हामी सुरक्षित एक सेन्ट पीटर्सबर्गको साथ जीवन सँगै पेंट थप्दछौँ!
Glycine: दबाइ को प्रयोगको लागि निर्देशन